राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि सुरु, कसको पक्षमा बहुमत ? - Sampurnab Khabar
राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि सुरु, कसको पक्षमा बहुमत ?
काठमाडौं,, पुस १७ ।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका १९ सदस्यका लागि आजबाट मतदानको प्रक्रिया सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा रिक्त हुने १९ सदस्यका लागि मतदानको प्रक्रिया आजबाट सुरु हुने जानकारी बताए।
यसपछि पुस २० देखि २५ गतेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली, निर्वाचन चिह्न दिने कार्यक्रम र निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने व्यहोरा आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ सय ९३ जना र प्रदेश सभामा ५३२ जना गरेर जम्मा दुई हजार २५ मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै मतदानको लागि आठ वटा मतदानस्थल र १४ वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग दिन १२ दल दर्ता भएका छन् । प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन अहिलेसम्म १२ दल दर्ता भएको बताए। आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपत्रमा चिह्नको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा चिह्न निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नामको वर्णानुक्रमका आधारमा चिह्न दिनुपर्ने हुन्छ।
Prevनेपालले अब अर्को ‘पोलिटिकल एक्सपेरिमेन्ट’ थेग्न सक्दैन : गगन थापा
Nextसरकार र डाक्टर गोविन्द केसी बीच भएको नौं बूँदे सम्झौंताको चर्को बिरोध ,विदेशमा विद्यार्थी पठाउने कम्पनीहरु ब’र्बाद हुन्छन् भने डरले सम्झौंता गरेको केपी ओलीको आरोप